EV Platform Msika (Chikamu: Chassis, Bhatiri, Suspension System, Steering System, Drivetrain, VeMotokari Yemukati, uye Vamwe; Magetsi Mota Yekutengesa: Hybrid Electric Vehicle uye Battery Electric Vehicle; Sales Channel: OEM neAftermarket; Vehicle Type: Hatchback, Sedan, Magetsi Ekushandisa, Uye Zvimwe; uye Platform: P0, P1, P2, P3, uye P4) - Global Viwanda Kuongorora, Saizi, Kugovana, Kukura, Maitiro, uye Forecast, 2020 - 2030
Kumanikidza Nharaunda Mitemo uye Kuwedzera Kudiwa kweMagetsi Mota Kukurudzira Msika Kukura
Nekuda kwekufambira mberi kwetekinoroji uye shanduko inodzora mamiriro, epasirese mota chikamu chakaona shanduko dzakakura pamakumi emakore apfuura. Parizvino, ino yazvino chikamu chemotokari kutenderera pasirese chiri kuramba chichienda kune rakasimba uye neramangwana rakasvibira, umo maOEMs nevamwe vanobatika vanomanikidzwa kuisa mari muhunyanzvi hutsva uye hunyanzvi hunowirirana nekuchinja kuri kuita mamiriro ezvinhu. Kwemakore gumi apfuura, mota dzemagetsi dzakawana mukurumbira wakakura kutenderera pasirese. Kunyange kuzivisa kune chekuita nemotokari dzemagetsi kuchiri kuramba kuchikura kutenderera pasirese, nazvo, kutengesa kwepasirese kwemotokari dzemagetsi kuri kuramba kuchikwira munzira yekukwira kumusoro- chinhu chinotarisirwa kukurudzira kukura kwemusika wepasi rose weEV chikuva.
Iko kudiwa kwemotokari dzemagetsi chinhu chinotungamira chinotarisirwa kutyaira wepasi rose EV musika wepuratifomu panguva yekuongorora. Makambani anoshanda mune yazvino EV chikuva musika ari kuwedzera kutarisa kupa mutengo-unoshanda uye unoshanda EV mapuratifomu kune vatengi vavo, uye kudzora mutengo wepakati pakati pemagetsi emagetsi enjini uye emukati epasi-injini (ICEs). Vatambi vakati wandei vepamusoro mumusika vanotarisirwa zvakare kuvhura mapuratifomu eEV mukati megumi ramakore riri kuuya- chinhu chingangobatsira kukura kwemusika wepasi rose weEV papuratifomu munguva yekufungidzira.
Kumashure kwezvinhu izvi, misika yepasi rose yeEV chikuva inotarisirwa kudarika US $ 97.3 Bn mucherechedzo pakupera kwa2030.
Vatambi veMusika Vanotarisa paKuvharidzira Mari Gap pakati peICCE neMagetsi Injini
Kunyangwe hazvo kudikanwa kwemotokari dzemagetsi kwaona kukura kusingagumi mumakore mashoma apfuura, mashoma eOEMs anoita purofiti yakakura kuburikidza nekutengesa mota dzemagetsi. Mukana wakakura wemitengo pakati peinjini dzemagetsi nemaICI chinhu chikuru chinotarisirwa kutyaira zvigadzirwa nekugadzira nzira yemutengo unoshanda-weEV chikuva mamodheru munguva pfupi iri kutevera. Mari yakakwira yemabhatiri emagetsi ndechimwe chezvikonzero zvakakosha nei mota dzemagetsi dzichitengwa kupfuura iyo yemasanganiswa kana mota dzinoshanda pane ICE-mota dhizaini. Nekuda kweizvozvo, vatambi vakati wandei vanoshanda muEV chikuva musika mamiriro vari kutsvaga nzira nyowani dzekubhadhara idzi mutengo nekutarisana nekugadzira iyo EV pane inotyisa uye modular chikuva. Nepo maOEMs akati wandei achiwedzera kuisa mari mukuvandudza chinangwa-chakavakwa EV mapuratifomu ekugadzira mota dzemagetsi, vamwe vari kunyanya kuvimba neICE-mota dhizaini yekugadzira mota dzemagetsi. Mukuda kwavo kugadzira mota dzemagetsi dzinobatsira, vatambi vemusika vari kuramba vachiongorora pfungwa dzakasiyana, kusanganisira mitsara yegungano iri nyore.
Vatambi veMusika Vanotarisa Pakutangisa Nyowani EV Mapuratifomu Kuti Uwane Kukwikwidza Edge
Kupupurira kudiwa kuri kukura kwemotokari dzemagetsi uye kutarisira kupinda kwepamusoro kwemotokari dzemagetsi mune ramangwana, makambani akati wandei parizvino ari kuda kuvhura mapuratifomu matsva eEV kuti vawane mukana wekukwikwidza mumisika yemazuva ano. Uye zvakare, nepo makambani epamusorosoro ari kuwedzera kuisa mari mukugadzirwa kwemapuratifomu eEV, kutanga kwakati wandei kwakapinda mumusika wepasi rose weEV chikuva, uye vari kuumba mubatanidzwa wezvekuita nevamwe vatambi vemusika kuti varatidze huvepo hwavo mumusika unokwikwidza weEV papuratifomu. Semuenzaniso, REE YeMotokari, yekutanga yeIsrael yakapinda mubatanidzwa neJapan KYB Corporation kuvhura kumisa-kumucheto kumisikidzwa kwenzvimbo dzemangwana dzemagetsi mapuratifomu. KYB Corporation inotarisirwa kupa mutsara wayo weanoshanda-uye anoshanda ekumisa masisitimu eEE's EV chikuva.
Uye zvakare, maOEMs akati wandei anotungamira ari kuwedzera kutarisa kuvaka mapuratifomu eEV akazvitsaurira kumisikidza kuvapo kwakasimba mumusika. Semuenzaniso, muna Kukadzi 2019, Hyundai akazivisa kuti kambani iyi inogona kugadzira yakazvipira mota yemagetsi chikuva icho chinonyanya kushandiswa nemotokari nyowani dzemagetsi dzinogadzirwa nekambani.
Kudiwa kweEV Mapuratifomu Anodzikira mu2020 pakati pe COVID-19 Denda
Iyo yepasi rese mota chikamu chakaona kudzikama kukuru mu2020 nekuda kwekupararira kwerinovhero COVID-19 denda. Kutanga kwe COVID-19 denda kwafambisa kukura kweEV chikuva musika mumugwagwa unononoka muna 2020, sezvo chikamu chemotokari muChina chaive chakavharwa kunyanya mukota yekutanga ya2020. Nekuda kweizvi, kupihwa kwezvinhu zvakasikwa uye zvemagetsi zvikamu zvakarova zvakanyanya pasi rese. Nekudaro, China zvayakavhura zvishoma nezvishoma maindasitiri ayo, mamwe mahombekombe makuru emotokari aive achimisa kutengeserana kwepamuganhu uye kutakurwa seyero yekudzora kupararira kweutachiona.
Musika weEV wepuratifomu unotarisirwa kuwedzera zvishoma nezvishoma kusvika kuchikamu chekupedzisira che2020, sekudiwa kwepasirese kweEVs zvapupu kukura kwakadzikama zvichitevera kuzorora kwezvirambidzo zvekuvhara uye kutengeserana.
Musika wepasi rose weEV wepamusika unotarisirwa kuwedzera paCAGR ine mwero ye ~ 3.5% panguva yekufungidzira. Kukura kwemusika kunonyanya kutungamirwa nekukura kwekudiwa kwemotokari dzemagetsi, kuwedzera rutsigiro rwehurumende kumotokari dzemagetsi, kuvandudza tekinoroji yemagetsi yemagetsi, nekusimbisa mitemo yekuchengetedza nharaunda. Vatambi vemusika vanofanirwa kutarisa kuvhura hunyanzvi uye mutengo usingadhuri wemagetsi mapuratifomu emagetsi kuti vawane makwikwi uye vagadzire nzvimbo yakasimba mumusika.
EV Platform Msika: Ongororo
Musika wepasi rose weEV wepamusika unotarisirwa kuwedzera kuCAGR ye3.5% panguva yekufungidzira. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nemitemo inowedzera inowedzeredza yekubuda kwemotokari pamwe nekusimudzirwa kwekusanganiswa uye magetsi emota kuitira kudzikisira gasi rinokuvadza remhepo pane zvakatipoteredza. Mitemo yehurumende inopesana nedhiziri nemota dzepeturu ndicho chikonzero chikuru chekuchinja kuda kwevatengi kuenda kumotokari dzemagetsi nekusimudzira kudiwa kweEv chikuva panguva yekufungidzira.
Musika weEVs uri kuwedzera padanho rakakosha uye kudyara padanho rekutanga kwakanyanya zvakanyanya kumabhazi, sezvo hurumende mumatunhu mazhinji dziri kudyara zvakanyanya mumaguta makuru kuitira kugadzirisa kabhoni kuburitsa kunogona kuwedzera musika weEV chikuva. EV chikuva chemabhazi emagetsi anopupurira kudiwa kwakanyanya muhupfumi hwakawanda, sezvo magetsi epuratifomu yeruzhinji angangoita zvine mutsindo mukuvandudza mhando yemhepo.
Vatyairi veEV Platform Market
Pakutanga, makuru mabhurandi aifarira kugadzira imwechete chikuva chemana mashanu mamodheru kurambidza capital investa. Zvisinei, kudiwa kwakawanda kubva kune vatengi vemotokari kwenzvimbo dzakananga maficha, dhizaini, uye mashandiro, kusanganisira chinhu chakasarudzika mumotokari chakaita kuti maOEMs agadzire akasiyana mapuratifomu emamodeli akasiyana, ayo anogona kusimudzira musika weEV chikuva panguva yekufungidzira.
Mafuta emafuta akapera uye munguva pfupi, zvisaririra zvemafuta zvinogona kunge zvapera. Zvinoenderana nechero chiyero chekushandisa, inofungidzirwa makore makumi mana nematanhatu emafuta emafuta anoramba ari pasirese, uye makore makumi mana nematanhatu egasi rechisimba zviwanikwa pasi rese. Dzimwe nzira dzemafuta anowanikwa mumusika, kusanganisira mota yemagetsi, CNG, LPG, mota inofambiswa nemhepo, uye LNG. Nekudaro, mota dzemagetsi dziri kuramba dzichitorwa, dzinogara dzichishandiswa kutakurwa mumaguta nemaguta makuru nemataundi. Izvi, zvakare, zvinogona kuita semhinduro yekuwanikwa kwakakwana kwezviwanikwa. Izvi zvinofungidzirwa kusimudzira musika weEV chikuva.
Vagadziri vanoverengeka, vakadai saTesla Inc. neNissan, vaunza mashandiro eEV anomhanya pane itsva EV chikuva chakadzikama mumigwagwa uye chinopa kumeso uye kusinganetsi-kukwira. Mari yekugadzirisa yakaderera yeEVs, nekuda kwekugadzirwa nyowani muEV chikuva chave chiri mukana wakawedzerwa, uyo ungangobatsira vatengi munguva refu. Izvi, zvakare, zvinogona kuendesa iyo EV chikuva musika.
Zvinetso zveEV Platform Msika
Mutengo wemotokari dzemagetsi uchienzaniswa neiyo yakajairwa ICE (injini yemoto yemukati) yakanyanya kukwirira uye inoonekwa sechinhu chekutanga chekudzivirira chemotokari yemagetsi uye misika yeEV chikuva.
Magetsi emagetsi magetsi anoda chiteshi chechaji, uye network yenzvimbo dzakadai dzinowanikwa zvine hunyanzvi dzinodiwa kuti vanhu vafambe nzendo refu. Zvakare, kudzoreredza mabhatiri kazhinji kunotora nguva ingangoita 1 awa, iyo isina kwese inowirirana nehunyanzvi hwegasi refuel, inoenderera ichidzora misika yeEV papuratifomu.
EV Platform Musika Chikamu
Zvichienderana nechinhu, chikamu chebhatiri chinofungidzirwa kuti chizoverengera chikamu chikuru cheEV chikuva musika panguva yekufungidzira. MaOEMs anotarisisa kugadzirwa kwemhando yepamusoro yeEV bhatiri inotarisirwa kuve nemuchina wakaderera pamitengo yakaderera, izvo zvinotungamira mukudyara kwakawanda muR & D yechikamu chebhatiri uye pakupedzisira yeiyo EV chikuva.
Zvichienderana nerudzi rwemotokari yemagetsi, bhatiri remagetsi mota chikamu chiri kuwedzera nekukurumidza kumhanya kweEV chikuva musika. Mazhinji maOEMs arikutarisa kuvandudzwa kwemabhatiri emagetsi emagetsi pamapuratifomu eEV achangobva kugadzirwa kwete ehybrid mota dzemagetsi, sezvo kudiwa kweBEVs kuri kudarika kweHEVs. Zvakare, mari yakakwira kwazvo uye hunyanzvi hunodiwa kugadzira HEV zvichienzaniswa neiyo yeBEV, sezvo BEV isingasanganisi ICE pachikuva cheEV uye nekudaro, iri nyore kuvaka.
Zvichienderana nerudzi rwemotokari, iyo chikamu chemotokari chinoshandiswa chakawana chikamu chakakura chemusika wepasi rose weEV chikuva. Vatengi muChina vanofarira compact sedans; zvisinei, kusvika kweSUVs nyowani uye inokwezva kwachinja kudiwa kune mota dzinoshandiswa. Iko kune kuderera mukutengesa kwema sedans. Izvo hazvina basa senge zvinokanganisa kana zvakapamhama seSUV uye vatengi muAsia neUS vanosarudza mota dzakakura uye dzinobatsira. Kuderedza kudiwa kwezvakakanganiswa muEurope neLatin America kuri nekuda kwekuwedzera kwehukuru hwemota diki. Iyo yakakura hatchback, iyo isingashande uye isingachinjiki ivo vanova.
EV Platform Musika: Kuongorora Kwenharaunda
Kubva padunhu, wepasi rose EV chikuva musika wakakamurwa kuenda kuNorth America, Europe, East Asia, South APAC, Latin America, uye Middle East & Africa.
Kukwikwidzana kupindirana kweEVs pachinhanho chakakosha munyika dzinoverengeka muEast Asia neEurope chinhu chakakurumbira chinotyaira wepasi rose EV musika wepuratifomu, sekudyara muR & D munyika idzi kuri kuwedzera. Europe iri kuona kuwedzera kwakasimba mukupinda kweEVs. Shure kwaizvozvo, kudiwa kweEVs kunotarisirwa kukwira panguva yekufungidzira, izvo zvinogona kuwedzera musika weEV chikuva.
IEast Asia EV yemusika wepuratifomu inotarisirwa kuwedzera zvakanyanya, ichiteverwa neEurope neNorth America. Iyo indasitiri yemotokari munyika, kusanganisira China, Japan, neSouth Korea inofarira tekinoroji, hunyanzvi, uye kuvandudza kweEVs dzepamberi. Kuvandudzwa kwenzvimbo dzepamberi uye nekukurumidza kuchaja zviteshi zvinofungidzirwa kufambisa iyo EV uye EV chikuva musika. BYD, BAIC, Chery, uye SAIC vatambi vakakosha vanoshanda muEast Asia EV musika, inoverengera chikamu chikuru cheEV chikuva musika.
EV Platform Musika: Makwikwi Landscape
Vatambi vekiyi vanoshanda mune yepasi rose EV chikuva musika inosanganisira
Alcraft mota Kambani
Vamwe maOEMs vanosarudza kuburitsa BEV kana PHEV pane yakagadziriswa ICE chikuva chekurambidza capital investa uye vane basa rekushanduka kugadzira. Zvivakwa zvakawandisa zveICE mota zvinotarisana nematambudziko mubhatiri kurongedza. Semuenzaniso, VW Boka rinotarisira kuvaka maEV eese saizi vachishandisa akati wandei ezvikamu zvakafanana kuti igone kuita ayo e-mamodheru abatsire. Iyo kambani inotarisira kuvaka MEB mota munzvimbo sere, pasirese, na2022. Zvakare, inofungidzira kuti yaizotengesa mamirioni gumi nemashanu mota pachikuva cheEV mumakore gumi anotevera.
E-Rickshaw imagetsi inofambiswa nemagetsi, mota yemavhiri matatu inonyanya kushandiswa kuita zvekutengesa kuitira kutakura vafambi nezvinhu. E-rickshaw inozivikanwawo semagetsi tuk-tuk uye toto. Inoshandisa bhatiri, traction mota, uye magetsi powertrain kuitira kuendesa mota.
Rickshaws inzira yakakurumbira yekutakura vafambi, kunyanya muIndia, China, ASEAN, uye nyika dzinoverengeka muAfrica. Mari yakaderera yekutakura, yakaderera mitengo yema rickshaws, uye kugona kwavo kufamba mumigwagwa yakazara yemadhorobha zvimwe zvakanakira rickshaws, izvo zviri kutyaira kudiwa kwavo pasirese. Zvakare, zvakaomarara tsika dzekubuda, kukwira kwemitengo yemafuta, zvinokurudzira pamusoro pee-rickshaws, uye nekuwedzera huwandu hwee-rickshaws kuri kuchinjisa kufarira kwevatengi kune e-rickshaws. Zvakare, iyo inorambidzwa kurambidzwa pamusoro pemafuta anofambiswa nemotokari ingangosimudzira kudiwa kwee-rickshaws.
Musika wepasi rose e-rickshaw unonyanya kudzivirirwa neasina kugadziridzwa ekuchaja zvivakwa munyika dzinoverengeka. Zvakare, kushomeka kwemitemo kuri kudzorawo musika wepasi rose e-rickshaw.
Musika wepasi rose e-rickshaw unogona kuganhurwa zvichibva parudzi rwe rickshaw, bhatiri kugona, chiyero chemagetsi, zvikamu, mashandisiro, uye dunhu. Panyaya yerudzi rwe rickshaw, musika wepasi rose e-rickshaw unogona kuiswa muzvikamu zviviri. Tichifunga nezve yakaderera huremu inodikanwa yehukuru hwekuita, iwo mwero wekutorwa kweakavhurika mhando e-rickshaws iri kukwira pakati pevatengi.
Zvichienderana nekwanisi yebhatiri, musika wepasi rose e-rickshaw unogona kukwikwidzwa muzvikamu zviviri. Yakakwirira iyo bhatiri kugona, kureba iyo renji ye-e-rickshaw; saka, varidzi vari kusarudza yakakwira chinzvimbo e-rickshaws. Nekudaro, kune epamusoro masimba emabhatiri, huremu hunowedzera muchikamu. Panyaya yesero remagetsi, musika wepasi rose e-rickshaw unogona kuiswa muzvikamu zvitatu. Kudiwa kwee-rickshaws ine mota yemagetsi pakati pe1000 ne1500 Watt iri kukwira, iyo inonyanya kuverengerwa nemutengo wavo wekubatsira pamwe neyakawandisa torque dhirivhari.
Panyaya yezvinhu, musika wepasi rose e-rickshaw unogona kuiswa muzvikamu zvishanu. Bhatiri chinhu chakakosha uye chinodhura chikamu cheiyo e-rickshaw. Mabhatiri anoda kugara achichengetwa uye anoda kutsiviwa mushure menguva yakatarwa, kuitira kuti uone kugadzikana uye kushanda kwakanaka kwemotokari. Chassis chimwe chakakosha chikamu cheiyo e-rickshaw uye nekudaro, inoverengera chikamu chakakura chemusika, maererano nemari. Zvichienderana nechikumbiro, musika wepasi rose e-rickshaw unogona kukwidziridzwa mukutakura kwevanhu uye kutakura zvinhu. Chikamu chevatakurwi chekutakura chakabata mugove wakakurumbira pamusika, maererano nemari, mu2020, iyo inofungidzirwa nekuwedzera kushandiswa kwema rickshaw kune vafambi vanochinja. Zvakare, kuiswa kwee-rickshaws nemakambani ekufambisa anodiwa angangoita chikamu chekufambisa chevapfu pamusika.
Panyaya yedunhu, musika wepasi rose e-rickshaw unogona kuiswa muzvikamu zvishanu zvine mukurumbira. Asia Pacific yakawana mugove mukuru wemusika, maererano nemari, muna 2020, iyo inonyanya kukonzerwa nekukwira kuri kudiwa kubva kune vatengi, zvinokurudzirwa nehurumende nemitemo inotsigira, kurambidzwa marikisi ane mafuta, uye kuwedzera mitengo yemafuta. Zvakare, marikisheni inzira yakakurumbira yekufambisa munzvimbo dzemumaguta dzenyika dzinoverengeka muAsia, senge China neIndia. Zvakare, kuvapo kwevatambi vepasi-rickshaw vanotungamira pasi rose mumwe mutyairi ane mukurumbira wemusika wee-rickshaw muAsia Pacific.
Vatambi vekiyi vanoshanda mumusika wepasi rose e-rickshaw ndeMahindra Electric Mobility Limited, MICROTEK, Nezonegroup, Arna Electric Auto Private Limited, GREEN VALLEY MOTORS, GEM E Rickshaw, SuperEco, Bajaj Auto Limited, Xianghe Qiangsheng Electric Tricycle Factory, Hitek Electric Auto Co ., YUVA E RICKSHAW, JS AUTO (P) LTD., Uye Pace Agro Pvt. Ltd.
Chirevo chinopa kuongororwa kwakazara kwemusika. Izvo zvinodaro kuburikidza neakadzama ehunhu hwehunhu, nhoroondo yezvakaitika, uye fungidziro inofungidzirwa nezve saizi yemusika. Iwo mafungidziro akaratidzirwa mumushumo akave akawanikwa uchishandisa nzira dzakatsigirwa dzekutsvagisa uye fungidziro. Nekuita izvi, chirevo chekutsvagisa chinoshanda senzvimbo yekuongorora uye ruzivo rwezvinhu zvese zvemusika, kusanganisira asi zvisingagumira kune: Matunhu enharaunda, tekinoroji, mhando, uye mashandisiro.
Chidzidzo ichi sosi yechokwadi data pa:
Market zvikamu uye zvidiki-zvikamu
Market mafambiro uye simba
 Kupa uye kuda
 Maitiro azvino / mikana / matambudziko
 Makwikwi mamiriro
 Kubudirira kwehunyanzvi
 Kukoshesa cheni uye kuongorora kwevanobata
Ongororo yedunhu inovhara:
 North America (US neCanada)
Latin America (Mexico, Brazil, Peru, Chile, nevamwe)
 Kumadokero kweEurope (Germany, UK, France, Spain, Italy, nyika dzeNordic, Belgium, Netherlands, uye Luxembourg)
 Kumabvazuva kweEurope (Poland neRussia)
 Asia Pacific (China, India, Japan, ASEAN, Australia, uye New Zealand)
 Pakati Pakati ne Africa (GCC, Maodzanyemba eAfrica, uye North Africa)
Chirevo ichi chakaunganidzwa kuburikidza nekutsvagisa kwekutanga kwekutanga (kuburikidza nekubvunzurudzwa, kuongororwa, uye kuongororwa kwevaongorori vane ruzivo) uye ongororo yechipiri (iyo inosanganisira masosi anoremekedzwa akabhadharwa, magazini ekutengeserana, uye dhatabhesi dhatabhesi dhata). Chirevo ichi zvakare chine huwandu hwakazara hwekuyera uye huwandu hwekuwongorora nekuongorora data rakaunganidzwa kubva kune vanoongorora indasitiri uye vatori vechikamu mumusika pane akakosha mapoinzi muindasitiri yakakosha cheni.
Kuongorora kwakaparadzana kwemaitiro aripo mumusika wevabereki, macro- uye micro-hupfumi zviratidzo, uye mirau nemvumo zvinosanganisirwa pasi pechiono chechidzidzo. Nekuita izvi, chirevo chinoratidzira kukwezva kwechikamu chimwe nechimwe chakakura panguva yekufungidzira.
 Kuongorora kwakazara kumashure, uko kunosanganisira kuongororwa kwemusika wevabereki
Kushanduka kwakakosha mumasimba emusika
Market chidimbu kusvika padanho repiri kana rechitatu
Historical, yazvino, uye fungidziro saizi yemusika kubva pakuona kweese kukosha uye vhoriyamu
 Kuzivisa uye kuongorora kwezvinoitika indasitiri
Market migove uye mazano evatambi vakakosha
 Kugadzira zvikamu zve niche uye misika yedunhu
 Kuongororwa kwechinangwa kwenzira yemusika
Mazano kumakambani ekusimbisa tsoka dzawo mumusika
Cherekedza: Kunyange hazvo kutarisirwa kwakatorwa kuti kuchengetedza matanho epamusoro-soro ekururamisa mumishumo yeTMR, musika uchangoburwa / mushanduko-wakasarudzika shanduko zvinogona kutora nguva kuratidza mukuongorora.
Ichi chidzidzo cheTMR chiri chese-chinosanganisira chimiro chemasimba emusika. Inonyanya kusanganisira kuongorora kwakakomba kwenzendo dzevatengi kana dzevatengi, nzira dzazvino nedzichiri kubuda, uye hurongwa hwehurongwa hwekugonesa maCXO kutora sarudzo dzakanaka.
Yedu yakakosha kutsigira ndiyo 4-Quadrant Sisitimu EIRS iyo inopa yakajeka kutarisisa yezvinhu zvina:
Customer Zviitiko Mepu
 Maonero uye Zvishandiso zvinoenderana neruzivo runofambiswa nedata
 Mhedzisiro Inogonesa kusangana nezvose zvakakosha zvebhizinesi
Maitiro Akasimba ekusimudzira rwendo rwekukura
Chidzidzo ichi chinoedza kuyedza tarisiro yazvino neyemangwana yekukura, nzira dzisina kubikwa, zvinhu zvinoumba mikana yavo yemari, uye kudiwa uye mapatani ekushandisa mumusika wepasirese nekuzvipaza kuita kuongororwa kwenzvimbo.
Aya anotevera matunhu zvikamu akafukidzwa zvakazara:
 Middle East ne Africa
EIRS quadrant fomati mumushumo inopfupikisa huwandu hwedu hwakawanda hwekutsvaga-inotungamirwa nedhata uye kuraira kweCXOs kuvabatsira kuita sarudzo dzakanaka kumabhizinesi avo uye kugara sevatungamiriri.
Pazasi pane mufananidzo weaya maquadrants.
1. Mutengi Wezviitiko Mepu
Chidzidzo ichi chinopa kuongororwa kwakadzama kwenzendo dzakasiyana dzevatengi dzine chekuita nemusika uye zvikamu zvacho. Iyo inopa akasiyana siyana vatengi tarisiro nezve zvigadzirwa uye sevhisi yekushandisa. Iko kuongorora kunotarisisa kutarisa kwavo kwekutambudzika maratidziro uye kutya kune akasiyana akasiyana vatengi touchpoints. Iko kubvunzana uye bhizinesi ungwaru mhinduro dzinobatsira vanofarira vane chekuita, kusanganisira maCXOs, kutsanangura yevatengi ruzivo mepu inoenderana nezvavanoda. Izvi zvinozovabatsira kuti vavimbe nekusimudzira kusangana kwevatengi nemhando dzavo.
2. Nzwisiso uye Zvishandiso
Aya maonero akasiana-siana mukudzidza akavakirwa pamatanho akajeka ekutanga nekusekondari kutsvagurudza kwakaitwa nevanoongorora panguva yekutsvaga. Ivo vaongorori uye nyanzvi dzeanachipangamazano kuTMR vanotora indasitiri-yakafara, huwandu hwevatengi vanoona maturusi uye nzira dzekutengesa musika kuti vasvike pamhedzisiro, izvo zvinoita kuti vave vakavimbika. Chidzidzo ichi hachisi chekungopa fungidziro uye fungidziro, asiwo kuongororwa kwakanyongana kweaya manhamba pamusika musimba. Aya maonerwo anosanganisa dhata-inotungamirwa sosi yekutsvagisa nehunhu hwehunyanzvi hwevanamuzvinabhizinesi, maCXO, vagadziri vemitemo, uye vanoita mari. Maonero acho achabatsirawo vatengi vavo kukunda kutya kwavo.
3. Zviitiko Zvinogoneka
Zvakawanikwa zvakaburitswa muichi chidzidzo neTMR igwara rinokosha pakusangana zvese zvakakosha zvebhizinesi, kusanganisira mamishinari-akatsoropodza. Mhedzisiro yacho painenge yaitwa yakaratidza mabhenefiti anooneka kune vane chekuita nebhizimusi nemasangano emabhizimusi kusimudzira mashandiro avo. Mhedzisiro yacho inowirirana kuti ifanane nehurongwa hweumwe neumwe hwehurongwa. Chidzidzo ichi chinoratidza zvekare zvimwe zvezviitiko zvenguva pfupi yadarika zvekugadzirisa matambudziko akasiyana siyana nemakambani avakasangana nawo mukufamba kwavo kwekusimbisa.
4. Maitiro Akarongeka
Chidzidzo ichi chinoshongedzera mabhizinesi uye chero munhu anofarira mumusika kuumba mapurani ehurongwa hwakawanda. Izvi zvave kukosha kupfuura nakare kose, zvichipiwa iko kusava nechokwadi kwazvino nekuda kwe COVID-19. Chidzidzo ichi chinofunga nezvekurangana kuti vakunde kukanganisa kwakasiyana siyana kwakapfuura uye kufanoona nyowani kuti dziwedzere kugadzirira. Aya masisitimu anobatsira mabhizinesi kuronga kwavo kwakarongeka kurongeka kuti vadzokere kubva mukukanganisa kwakadai maitiro. Kupfuurirazve, vaongorori veTMR vanokubatsira iwe kuputsa mamiriro akaoma uye kuunza kutsiga mune isina chokwadi nguva.
Chirevo chinojekesa pane akasiyana maficha uye mhinduro dzakanangana nemibvunzo pamusika. Zvimwe zvezvakakosha ndezvi:
1. Ndeipi ingave sarudzo yakanakisa yekudyara yekupinda muzvigadzirwa zvitsva nemitsara yebasa?
2. Ndeapi makurudziro ekukosha anofanirwa kuve nemabhizimusi panguva yekuita kutsvagisa uye kusimudzira mari?
3. Ndeapi marongero achanyanya kubatsira kune vanobatika kusimudzira yavo yekutengesa network?
4. Ndeapi matunhu anogona kuona kudiwa kuchikura mune mamwe zvikamu munguva pfupi iri kutevera?
5. Ndedzipi dzimwe nzira dzakanakisa dzekugadzirisa mutengo nevatengesi idzo vamwe vatambi vakadzika midzi vakabudirira?
6. Ndedzipi pfungwa dzakakosha idzo C-suite irikushandisa kuendesa mabhizinesi munzira itsva yekukura?
7. Ndeapi marongero ehurumende anogona kupokana nemamiriro emisika inokosha yedunhu?
8. Mamiriro ezvinhu enyika neupfumi ari kubuda anokanganisa sei mikana munzvimbo dzakakura dzekukura?
9. Ndeapi mamwe emikana yekutora-kukosha muzvikamu zvakasiyana?
10. Chii chichava chipingaidzo pakupinda kwevatambi vatsva mumusika?
Iine ruzivo rwakasimba mukugadzira yakasarudzika misika yemusika, Transparency Market Research yakabuda seimwe yekambani dzinovimbika dzemakambani ekutsvagisa pakati penhamba huru yevanobata pamwe neCXOs. Rondedzero yega yega paTransparency Market Research inoenda kuburikidza neyakaomarara tsvagiridzo mune ese mativi. Vatsvaguriri veTMR vanochengeta tarisiro padyo pamusika uye vanobvisa zvinobatsira kukura-kukurudzira mapoinzi. Aya mapoinzi anobatsira avo vanobatika kuronga zvirongwa zvavo zvebhizimusi zvinoenderana.
Vatsvakurudzi veTMR vanoita hunhu hwakakwana uye hwakawanda. Uku kutsvagurudza kunosanganisira kutora zvigadzirwa kubva kune nyanzvi mumusika, yakanangana nezviitiko zvazvino, uye zvimwe. Iyi nzira yekutsvaga inoita kuti TMR ibude kubva kumamwe mafemu ekutsvaga emusika.
Heano mabudiro anoita Transparency Market Kutsvaga vanobatana navo uye maCXO kuburikidza nemishumo.
Kufungidzira uye Kuongorora kweiyo Strategic Kubatana: Vatsvaguriri veTMR vanoongorora zviitiko zvechizvino-zvino sekubatanidza, kutenga, kudyidzana, kubatana, uye kudyidzana. Ruzivo rwese rwakaunganidzwa uye rwakaverengerwa mushumo.
Yakakwana Musika Saizi Kufungidzira: Chirevo chinoongorora huwandu hwevanhu, kukura kwesimba, uye kugona kwemusika kuburikidza nenguva yekufungidzira. Izvi zvinotungamira mukufungidzirwa kwehukuru hwemusika uye zvakare zvinopa rondedzero yekuti musika unotora sei kukura panguva yekutarisa.
Investment Research: Chirevo chinotarisa kune inoenderera uye iri kuuya mikana yekudyara kune imwe musika. Izvi zviitiko zvinoita kuti vanobatika vazive mamiriro azvino ekudyara pamusika.
Chiedza Bhuruu Midhudhudhu, 22.5 Mavhiri Evhiri, E Bhasikoro Kukanya, Yakanakisa Lithium Midhudhudhu Battery Chaja, Kufambisa Pane Bhasikoro, Rutivi Mira Puck,